Ukulungiselela ukubhiyozela uSuku lweSizwe kunye noMnyhadala waMaphakathi-Ekwindla, intlanganiso yezemidlalo encinci ibanjelwe eShuangyang Medical. Iimbaleki zimelwe kumasebe ahlukeneyo: iSebe lezoLawulo, iSebe lezeMali, iSebe lokuThenga, iSebe leThekhinoloji, iPro ...
Ingqungquthela yama-21 yama-Orthopedics Academic kunye neNkomfa ye-14 ye-COA yeziFundo zoMbutho Wezonyango wase-China zicwangciselwe ukubanjwa kwiNdibano yesiZwe kunye neZiko leMiboniso (eShanghai) ukusuka nge-14 ukuya kwi-17 ka-Novemba 2019. Eli lixesha lokuqala lokuba i-COA (iThothope yaseTshayina .. .
Ukhuphiswano lwezakhono luya kubanjwa nge-29 kaSeptemba eShuangyang Medical ukulungiselela ukubhiyozela isikhumbuzo seminyaka engama-70 sokusekwa kweRiphabhlikhi yaseTshayina. Wuphathe umsebenzi njengomsebenzi kwaye uwuhloniphe umsebenzi wethu nokuba wenza ntoni na kwimveliso esiyithathayo, kwaye siqhubeke nokwenza ...
Ingqungquthela yama-20 yezifundo zamathambo kunye nengqungquthela ye-13 ye-COA yezifundo zoMbutho Wezonyango waseTshayina zabanjwa eXiamen ukusukela nge-21 ukuya kwi-24 kaNovemba, 2018. Ndijonge phambili ekuhlanganeni nawe eShuangyang Medical booth. ...
Ingqungquthela ye-19 yemfundo yamathambo ye-Chinese Medical Association kunye ne-12th Chinese Orthopedic Association (COA) ibibanjelwe e-Zhuhai, kwiPhondo lase-Guangdong ukusuka nge-15 ukuya kwi-18 ka-Novemba, 2017. Ndijonge ukudibana nawe eShuangyang Medical booth. ...
Aphola njani amathambo aphukileyo?
Amathambo ayaphilisa ngokwenza intlala ukuze uvale okwethutyana umngxunya owenziwe yikhefu. Oku kuthatyathelwa indawo lithambo elitsha. Ukuwa, kulandele ukuqhekeka - abantu abaninzi abayazi le nto. Amathambo aphukileyo abuhlungu, kodwa uninzi luyaphilisa ...
I-Fibula Fracture: Iimpawu, unyango kunye nokubuyisela kwimeko yesiqhelo
I-fibula kunye ne-tibia ngamathambo amabini amade omlenze ongezantsi. Ifibula, okanye ithambo lamathole, lithambo elincinci elibekwe ngaphandle komlenze. I-tibia, okanye i-shinbone, ithambo elithwala ubunzima kwaye lingaphakathi kumlenze ongezantsi. I-fibula kunye ne-tibia zidibanisa kunye ...
2017 COA Exhibition Isaziso
Umnyhadala we-12 we-International Congress of Chinese Orthopedic Association (COA) Umboniso uzakubanjwa ukusuka nge-15 ukuya kweye-18. Jonga phambili ukudibana nawe.
Intlanganiso yoNyaka ka-2016
IShuangyang Medical ibambe isidlo sangokuhlwa sonyaka nge-18 kaJanuwari 2017 ukubulela bonke abasebenzi ngokusebenza kwabo nzima ngo-2016, kwaye banqwenelela oogxa bakho impilo entle, ukonwaba kosapho kunye nomsebenzi uhamba kakuhle kuwo wonke umntu kunyaka omtsha! ...
Inkomfa yezifundo zamathambo ye-18th kunye ne-11 ye-COA yezifundo zenkomfa yamazwe aphesheya ngo-2016 zabanjwa eBeijing National Conference Centre ukusukela nge-17 kaNovemba 2016 ukuya kuNovemba 20, 2016. Ndijonge phambili ekuhlanganeni nawe eShuangyang Medical booth. ...
Umboniso we-COA ka-2014
Ingqungquthela yama-16 yamaTshayina yaMathambo kunye ne-9th Chinese Orthopedic Association (COA) izakubanjelwa e-Beijing National Conference Centre ukusukela nge-20 ukuya ku-23 ku-Novemba 2014. Ndijonge phambili ekuhlanganeni nawe eShuangyang Medical booth. ...
Izatifikethi zoYilo lwePatent
Inkqubo ye-anatomic titanium mesh kunye ne-titanium binding system yaphehlelelwa, kwaye sinezatifikethi zepatent yoyilo yeemveliso ezingama-25.